TikTok က ဖင်လန်လူငယ်များ၏နံနက်ပိုင်း အလေ့အထများကို ပြောင်းလဲပေးကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Los Angeles ကောင်တီ၊ Culver မြို့ ရှိ Tiktok Los Angeles ရုံး၌ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် ဗွီဒီယိုမျှဝေသည့် TikTok လိုဂိုအားပြသထားစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဟယ်လ်ဆင်ကီ၊ မေ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဗွီဒီယိုများ မျှဝေပေးသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် TikTok သည် ဖင်လန်လူငယ်များ၏ နံနက်ပိုင်း အလေ့အထများကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ DNA က မေ ၁၂ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
“အရင်ကကျောင်းမသွားခင် ရုပ်မြင်သံကြားမှ ကလေးများအစီအစဉ်အားကြည့်ရှုခဲ့သော်လည်း အခုတော့နံနက်ပိုင်း ကို TiKTok နဲ့ အချိန်ဖြုန်းလာကြတယ်’’ ဟု ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
DNA မှကောက်ယူရရှိသောမိုဘိုင်းဒေတာအချက်အလက်များအရ နံနက် ၇ နာရီမှ ၈ နာရီအကြား TikTok အသုံးပြုမှုသိသာစွာ တိုးတက်လျက်ရှိသော်လည်း ထိုကဲ့သို့သောနံနက်ပိုင်းများတွင် အခြားလူမှုကွန်ရက်များကို အသုံးပြုခြင်း မတွေ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဗွီဒီယို မျှဝေတင်ဆက်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံတကာသုံး လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်း ဖြစ်သည့် Douyin မှ တီထွင်ထားသော TikTok အား အသုံးပြုသူ လူအရေအတွက်မှာ တွက်ချက်မှုအရ ထိပ်တန်းဆိုရှယ်မီဒီယာ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။ ထိုအတောအတွင်း TikTok အသုံးပြုသူအများစု၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအရ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
DNA မှ ကောက်ယူသည့် စစ်တမ်းများအရ အသက် ၅ မှ ၁၂ နှစ်အရွယ်ရှိဖင်လန်နိုင်ငံသားမိဘငါး ဦး တွင်တစ် ဦး က၎င်းတို့ကလေးများသည် TikTok ကိုနေ့စဉ်သို့မဟုတ် တစ်ပါတ်လျှက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုကြကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှင့် နှိုင်းယဉ်ပါက အသုံးပြုသူ ၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာကြောင်း သိရသည်။ အသက် ၁၃ နှစ် မှ ၁၆ နှစ် အတွင်း ရှိ လူငယ် ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် နေ့စဉ် Tiktok အသုံးပြုသူများဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာကြောင်း သိရသည်။
DNA အာတာနက်ဘရုတ်ဘန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်း ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Jarno Haikonen က TikTok သည် ကျောင်းသူကျောင်းများနှင့် လူငယ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် အချို့သော မိသားစုများသည် နံနက်ပိုင်း အချိန် များတွင် ကလေးများအတွက် နံပတ် ၁ လှုပ်ရှာမှုအဖြစ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အခြား DNA ၏ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအသက် ၁၆ မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် TikTok ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၄ နှစ်အတွင်း အသုံးပြုသူ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ၃၄ နှစ် အထက် အသုံးပြုသူမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
HELSINKI, May 12 (Xinhua) — The social media video sharing platform TikTok has altered the morning routines of young Finnish people, Finnish telecommunications provider DNA said on Wednesday inapress release.
“Whereas children for decades have been watching children’s programmes on television before going to school, they now spend time with TikTok in the morning,” the release said.
As the international version of the Chinese video sharing platform Douyin, TikTok is one of the most recent social media applications and has already become one of the top mobile applications calculated by number of users. In the meanwhile, TikTok’s user profile is young.
Jarno Haikonen, vice president of the DNA broadband and television business, noted that TikTok is clearlyaservice for schoolchildren and young people, and in some families it has already made itself children’s long-standing No. 1 activity in morning time.
Meanwhile, another DNA survey indicated that 71 percent of 16-24-year-old users used TikTok daily. The share in 25 to 34-year-olds was 19 percent and while in older age categories under ten percent. Enditem